Michael Carrick Oo Macsalaameeyay Jamaahiirta Garoonka Old Trafford – Gool FM
Michael Carrick Oo Macsalaameeyay Jamaahiirta Garoonka Old Trafford
(Man United) 11 Maajo 2018. Michael Carrick ayaa ciyaaray kulankiisa ugu dambeeyay ee kooxda Manchester Unitead, kadib markii ay guul 1-0 ay kaga gaareen Watford kulankoodii ugu dambeeyay Premier League ee xili ciyaareedkan.
Kulankiisii 464-aad ayuu Michael Carrick ku dhawaaqay in ciyaaraha uu ka fariisanayo dhamaadka xili ciyaareedkan, wuxuuna kula biiri doonaa qeybta farsamada kooxda Manchester United tababare Jose Mourinho xili ciyaareedka soo aadan.
Carrick oo kula hadlay jamaahiirta Manchester United garoonka Old Trafford ayaa wuxuu yiri: “Anigoo ku hadlaya magaca ciyaartoyda, shaqaalaha farsamada iyo tababaraha, waxaan dooneynaa inaan idinkaga mahad celino taageeridiina ee sanadkan, waxaan soo marnay xili fiican iyo xiliyo xun, laakii xili ciyaareedka waxaan kaga sameesanay booska kaalinta labaad, waadna ku mahadsan tihiin”.
“Waan soo koobi doonaa hadalkeyga sababtoo ah waxaa leygu eedeeyaa hadalkeyga dheer ee kulankii sagootinta ee sanadkii hore”.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo dhamaanba jamaahiirta, garab istaagooda sanadihii lasoo dhaafay, garoonkan iyo banaankaba, waxaan heystaa xusuusyo badan aan la ilaabi Karin, haar ahaan meeshan”.
“Waa meel fiican ee kubadda cagta lagu ciyaaro, waxaanad ku mahadsantihiin taageerideyda mudada 12-kii sano ee la soo dhaafay”.
WARBIXIN: Kooxaha usoo Baxay Champions League kuwa ciyaaraya Europe league iyo Naadiyada ka haray Horyaalka Premier League.